Tsvaga runako rweMediterranean cruises | Kufamba Nhau
Susana Garcia | | Ngarava dzechikepe, General
Kana iwe uchida pfungwa ye tora zororo pane imwe huru yeMediterranean cruise, wobva watarisa izvo zvatinokuudza. Mediterranean cruises yakajairika kwazvo kune zvakawanda zvinhu. Kune ese marudzi emafambiro, kumira kunoitwa munzvimbo dzinonakidza seBarcelona, ​​Santorini kana Marseille uye tinokwanisa zvakare kuwana akasiyana siyana ezviitiko uye varaidzo pachikepe.
Ita Mediterranean cruises chinhu chinoitwa nemazana evanhu gore rega rega. Nzvimbo ine yakanakisa mamiriro ekunze uye nzvimbo zhinji dzakazara nenhoroondo uye runako rwepanyama zvinokwezva vashanyi vazhinji. Asi kana iwe uchizoronga yako cruise iwe unofanirwa kuziva zvishoma zvinhu, kuti usarasika nezvose zvinopihwa uye mafambiro.
1 Nguva yekuenda kuMediterranean
2 Chii chaunounza pane yako cruise
3 Mhando dzeMediterranean cruises
4 Main kumira paMediterranean cruises
4.3 Valletta muMalta
Nguva yekuenda kuMediterranean
Iyo Mediterranean inopa yakanaka mamiriro ekunze mukati megore. Zhizha dzinopisa kwazvo pane dzimwe nzvimbo, saka iyo nguva dzakanakisa dzinogara dziri matsutso nematsutso, apo mamiriro ekunze anenge akati rebei. Kana isu tichizofamba rwendo rweMediterranean, vanhu vazhinji vanosarudza zhizha, saka mitengo inowanzo kuve yakakwira panguva ino, nekuti anenge munhu wese aine mazororo avo uye anogona kunakirwa nemamiriro ekunze akanaka. Chero chero mwaka waunopinda iwe, unogona kunakirwa nemahombekombe echikepe uye nekushambira kwakanaka munzvimbo dzakasiyana uye nzvimbo dzekuratidzira.
Chii chaunounza pane yako cruise
Pakufamba unogona kuita zvinhu zvakawanda, saka zvakakosha kuti utarise izvo zvatinofanira kuuya. Nguva dzose unofanira kuva sunscreen, sezvo zvakajairika kuzorwa nezuva uye kushandisa madziva, pamusoro pekuti zuva reMediterranean rinogona kukurumidza kutishunira. Kune rimwe divi, isu tinofanirwa kupfeka zvese mbatya dzakanaka uye mbatya dzinoyevedza pachiitiko chakakosha. Shangu dzinonyaradza dzinodiwa, nekuti muzviteshi zvakajairika kufamba kana kuenda kumafaro panguva yemasikati anomira.
Mhando dzeMediterranean cruises
MuMediterranean unogona kusarudza nzvimbo mbiri dzakanyatsosiyaniswa. Kune rimwe divi kune Western Western, iyo ine miganhu yeSpain, pamwe neBalearic Islands, France neItari. Kune rimwe divi isu tine kumabvazuva kweItari, zviwi zveGreek neTurkey. Izvo zvakare zvinonakidza asi zvakatosiyana nzvimbo. Nzira yakanaka yekusarudza imwe nzvimbo kana imwe ndeye kufunga nezverudzii rwemaguta atinoda kuona. Barcelona, ​​Marseille, Ibiza kana kunyange Roma ichienzaniswa nenzvimbo dzakaita Istanbul, Venice kana Santorini.
ari mafambiro edzimwe kambani anonyatsotiratidza nzvimbo iyo ichashanyirwa, nguva yekufambisa uye kumira uye zvingangodaro mafambiro. Kana tangosarudza nzvimbo, tichafanirwa kusarudza mafambiro mairi. Chinhu chekutanga kufunga nezvehuwandu hwemazuva atinawo. Zvino, pakati penzira dzinogona kuitika, sarudza iyo yaunonyanya kufarira. Tarisa kumira kwavanoita uye zvakare iyo nguva yaunogona kunakidzwa nemaguta uye mafambiro anogona kuitwa munzvimbo iyoyo.
Main kumira paMediterranean cruises
PamaMediterranean cruises zvimwe zviyero zvinomira zvinokwezva kutarisisa kwakawanda kuvashanyi uye izvo zvinowanzo kuve zvinokwezva zvikuru zvezvikepe zvekufamba. Iwe unofanirwa kuona kuti zvingamira ndezvipi nekuti mune imwe cruise tinogona kuona maguta akati wandei uye mapoinzi ezvekufarira izvo zvisingazotisiye tisina hanya uye ichi ndicho chiremerera chikuru chevashanyi.
Iri guta, iro guta guru, nderimwe remapoinzi ekumisa kune mazhinji ma cruise muBalearic Islands. Muguta iwe unogona kuona nzvimbo senge Cathedral Basilica inozivikanwa yaSanta Mary anozivikanwa saLa Seu mune Levantine Gothic maitiro. Iyo iri pamahombekombe eiyo bay yePalma uye zvese zviri kunze nekunze zviri zvechokwadi zvinoshamisa. Muguta iwe unofanirwa zvakare kuona yakanaka Bellver Castle, iyo ine inonakidza denderedzwa chirongwa. Zvimwe zvinhu zvinogona kushanyirwa ndeyePalacio de L'Almudaira kana kunakidzwa nemabhichi ayo uye nharaunda yayo.
Iri nderimwe remaguta anogona kunge ari pakati penzira dzekufambisa. Venice inotipa nzvimbo dzinonakidza seye St Mark's Square neBasilica yayo, iyo Doge's Palace kana migero mikuru. Rialto Bridge kana Bridge reSighs inzvimbo dzakanyanya kudanana dzisingafanire kupotsa.
Chitsuwa chidiki cheMalta chingave imwe yenzvimbo dzinopihwa ngarava. Chitsuwa chinotipa nzvimbo dzakakosha senge guta rakanaka re La Valletta, nemigwagwa yayo yekare uye nerunako rwayo rukuru, kana kuti Mdina, akura kudaro. Isu tinogona zvakare kuona chitsuwa cheGozo nemabhichi ayo uye mawere kana chitsuwa cheComino neBlue Lagoon yayo inozivikanwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » General » Mediterranean cruises